Nepali Sex With Bhauju कम्पनी को क्वाटर मा छिमेकी भाउजु लाई चिकेको कथा ! - Desi Sexy Stories
Home » Nepali Sex Stories » Nepali Sex With Bhauju कम्पनी को क्वाटर मा छिमेकी भाउजु लाई चिकेको कथा !
भाउजु ले पनि सोधि हाल्नु भो – होइन के गर्न लागेको ? मैले भने पिसाब फेर्न नि।।। अनि भाउजु ले भनिन पिसाब फेर्न पनि त्यति बेसरि हल्लाउनु पर्छ त ? म त झन के भनु के गरु जस्तो भएर चुप्प लागें । भाउजु ले भनिन “किन हात लाई दुख दिनु हुन्छ राजु बाबु हामि हुदा हुदै ।” म त आश्चर्य चकित भएँ । भाउजु को यस्तो ब्यबहार कहिले देखेको थिईन मैले । मैले डराउँदै भने “भाउजु दाई ले थाहा पाउनु भयो भने के हाल होला ?” भाउजु पुरा ईमोसन मा थिईन् र भन्न थालिन् “तपाईको दाई को माल ले काम गर्न सक्दैन, यहाँ तपाईको तगडा माल ले काम पाको छैन अनि के गर्छन् र ति जड्याहा दाई ले ?” भाउजु यो कुरा राम्रो होइन भनेर म सम्झाउदै थिएँ, भाउजु त झ्याप्पै मेरो लाडो समाउन पुगिन् । मलाई अब के गर्ने के नगर्ने भयो । र मैले पनि चुप लाग्ने विचार गरें किन कि मैले कसै लाई बलजफ्ति गरेको थिइन ।
भाउजु ले मेरो लाँडो पेन्ट बाहिर बाटै च्याप्प समाउनु भयो । वहाँको लाँडो समाउने तरीकाले मलाई सिरिङ्ग बनायो र शरीर भरी करेन्ट लागे जस्तै भयो । “खै खोल तिम्रो सबै लुगा , म तिमीलाई सघाउँछु” भाउजुले भन्नु भयो । मैले पनि कुनै संकोच बिना सबै लुगा खोलें र वहाँको अगाडी नाङ्गो भएँ । “ओ हो , तिम्रो लाँडो त गजबको पो रहेछ !, यस्तो लाँडोले चिकाउन पाए पो मजा आऊँथ्यो । तिम्रो दाईको त सानो न सानो छ , त्यस माथी एक छिन पनि कडा हुँदैन , १०-१२ पटक हल्लियो कि लुत्रुक्क पर्छ ” भाउजु उत्सुक हुँदै एक्लै कराउँदै हुनु हुन्थ्यो । म एक बालक झै हेरेको हेरेकै भएँ , साथै भाउजुको कुरा सुनेर म अवाक बनी बसी रहें । भाउजुले च्याप्प मेरो लाँडो समाउनु भयो अनि आफ्नो मुखमा हाल्नु भयो र केटाकेटीहरूले आइसक्रिम खाए झैं गरेरे मेरो लाँडो चुस्न थाल्नु भयो । वहाँको यो लाँडो चुसाई मेरो लागि अत्यन्त रोमाञ्चक थियो । शरीर भरी तरङ्ग पैदा भई रहेको थियो । मलाई एक प्रकारको रमाईलो अनुभव भईरहेको थियो, यस्तो आनन्द शायद म पहिलो पटक महशुस गरीरहेको छु । “म हुँदा हुँदै किन आफ्नो हातलाई दुःख दिई रहेको तिमीले, यसो मलाई एक पटक ईशारा गरे हुन्थ्यो नि राजु बाबु” भाउजुले खुशी हुँदै भन्नु भयो । “हुन्छ नि अब देखि भन्छु नि” मैले भने । भाउजु मेरो लाँडो चुस्नमा ब्यस्त हुनुहुन्थ्यो । वहाँ घरी मेरो पुरै लाँडो मुख भित्र छिराउनु हुन्थ्यो त कहिले आफ्नो जीब्रो ले मेरो लाँडोको टुप्पो खेलाउनु हुन्थ्यो । कहिले मेरो गेडाहरू मुख भित्र छिराएर चुसे जस्तो गर्नु हुन्थ्यो । जे गर्नु हुन्थ्यो , मलाई अत्यन्तै रमाईलो भई रहेको थियो । करीब १०-१५ मिनेट जति भाउजुले मेरो लाँडो चुस्नु भयो ।
म ऊभिएको थिएँ । अब भने मलाई गाह्रो भएर आउन थालि सकेको थियो, मेरो लाँडोले माल झार्न लागेको थियो । भित्रबाट उकुस मुकुस भएर आयो, कता कता के नै निस्केला झैं भयो । “मेरो झर्न लाग्यो भाउजु” मैले भने । “हुन्छ झार झार, मेरो मुख भित्रै झार” भाउजुले मुख आँऽऽ गर्दै भन्नु भयो । मैले पनि वहाँको मुख भित्र सबै माल झारि दिएँ, भाउजुले मिठो मानेर मेरो सबै माल निल्नु भयो अनि लाँडो लाई पुनः चुस्न थाल्नु भयो । लाग्थ्यो भाउजु लाई मेरो सबै माल पिउन मन थियो र चुसेर सबै माल निलिसक्नु भएको थियो । म शिथिल भईसकेको थिए । जब भाउजुले मेरो सबै माल चुसी सक्नु भयो अनि उठ्दै भन्नु भयो “आज बल्ल गजबको लाँडो चुस्न पाईयो…. त्यसपछि राजु बाबु धेरै हात लाई दुख नदिनुस है बरु मलाई इसारा गर्नुस है भन्दै कोठा बाट निक्लिईन । त्यो दिन मेरो अत्यन्त रोमन्चित हुदै बित्यो । मलाई फेरि अहिले नै गएर भाउजु लाई चिकौं जस्तो लाग्दैथ्यो तर के गर्ने ती छिमेकि दाई पनि कोठा मा नै थिए । उनको नाईट ड्युटी थियो । जब रात पर्यो अनि ती दाई फ्याक्ट्री गए, मैले तुरुन्त भाउजु लाई फोन गरें । के हो भाउजु म आउँ की तपाई आउने ? भाउजुले भनिन म १५ मिनेट मा आउछु, छोरी सुत्ने बेला भएको छ ।
म अब उत्तेजित हुँदै भाउजु को प्रतिक्षा गर्न थालें । उनि ५ मिनेट मा नै मेरो कोठा भित्र आईन । कोठा मा आउने बित्तिकै भाउजुले मलाई ग्वाम्म अंगालो हाल्नु भयो र मलाई किस गर्न थाल्नु भयो । मैले पनि वहाँलाई अंगालोमा हालें र वहाँ सगै किस गर्न थालें । भाउजुको मुखमा मैले मेरो मुख जोडें अनि टङ किस गर्न थालें । भाउजु लाई निकै रमाईलो भएछ, लामो लामो सास फेर्न थाल्नु भयो, आँखा चिम्म गरेर मलाई किस गर्न थाल्नु भयो । मैले बिस्तारै भाउजुको ब्रा को हुक खोलि दिएँ अनि ब्रा निकाली दिएँ । ओ हो भाउजुको दुधको पोका निकै ठूलो थियो, भाउजुको दुधको पोका माड्न थालें, भाउजु लाई पनि निकै मजा आए जस्तो थियो, वहाँ “आहहहहहहह ऽऽऽऽऽऽऽ ओहहहहहहहहऽऽऽऽऽऽ उफफफफफफऽऽऽऽऽऽऽ” गर्दै कराउँदै हुनु हुन्थ्यो । वहाँको यस आवाजले मलाई अझ जोश बढाउँदै थियो । मेरो लाँडो ठन्केर खपी नसक्नु भई सकेको थियो । बिस्तारै मैले मेरो मुख भाउजुको दुध निर लगें अनि चुस्न थालें । लाग्थ्यो म सानो बच्चा हो अनि दुध खाँदैछु । दुईटै पोका पालै पालो चुस्न थालें । म जति जोशमा दुध चुस्थें भाउजु त्यती कराउनु हुन्थ्यो । “आहहहहऽऽऽऽऽऽऽ ओहहहहहहहहऽऽऽऽऽऽ, अझ कस्सेर चुसन, मजा आईरहेको छ” भाउजु जोशमा कराउन थाल्नु भयो । म पनि कस्सी कस्सी दुधको पोकाहरू चुस्न थालें ।
१० मिनेट जति चुसे पछि म उठें अनि भाउजु लाई खाटमा सुताए अनि पेन्टी खोलें र मेरो पनि सबै लुगा खोलि नांगो भएँ । भाउजुको दुबै खुट्टा फट्याएर भाउजुको पूती निर मुख लगें । भाउजुको पुती पुरै पानी ले भिजेको थियो । पुती वरीपरी छ्याप छ्यापी भिजेको थियो । जब मुख पुर्याए, त्यहाँ बाट आएको गन्ध एक प्रकारको रमाईलो थियो । गन्धको वास्ता नै नगरी मैले भाउजुको पुतीको पानी चाट्न थालें । बिस्तारै बिस्तारै जिब्रोले भाउजुको पुतीको टीसी चलाउन थालें । “आहहहहऽऽऽऽऽऽऽऽ ओहहहहहहहहहहहऽऽऽऽऽऽऽ उफफफफफफऽऽऽऽऽऽऽऽ, यस्तो रमाईलो मलाई कहिले भाको थिएन, अझै मजाले खेलाउन प्लिजऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ, आहहहहऽऽऽऽऽऽ ओहहहहहहऽऽऽऽऽऽऽऽऽ, अझै अझै” भाउजु निकै ईमोशनमा आएर कराउन थाल्नु भयो । म पनि के कम थिएँ र कहिले जिब्रोले टीसी खेलाउथे, कहिले बिस्तारै टोकिदिन्थे, कहिले दुधको मुण्टा चुसै झै गरी चुसिदिन्थे । मेरा हरेक चुसाई अनि टोकाईमा भाउजु मदहोश हुन्थिन, म पनि जोशमा सो क्रमलाई निरन्तरता दिदैं थिएँ ।
१५-२० मिनेट जति पुतीमा खेलाउने काम भयो, भाउजुको पुतीले यती पानी झार्यो कि खाटको तन्ना सबै भिजीसकेको थियो । अनि म जुरुक्क उठें अनि भाउजुलाई पनि उठाएँ । हामी खाट बाट तल झर्यौ र उभी उभी किस गर्न थाल्यौ । भाउजुको पुती को रस मेरो मुख वरी-परी लागेको थियो, त्यो सबै मैले भाउजु लाई पनि चखाई दिएँ । “पुतीको रस को स्वाद कस्तो छ भाउजु ?” मैले सोधें । “मिठो छ मिठो, अब तिमी ले जे दिए पनि म खान तयार छु” भाउजुले भन्नु भयो । किस गर्दै मैले मेरो दुई औला भाउजुको पुती मा छिराएर खेलाउन थालें । भाउजु लाई यसो गर्दा झन रमाईलो भएछ । “तिमी त केटी लाई खेलाउन निकै सिपालु पो रहेछौ, जे होस आज जस्तो रमाईलो शायद मलाई कहिले भाको थिएन” भाउजु ले उत्सुक हुँदै भन्नु भयो ।
त्यस पछि मैले भाउजु लाई फेरि खाटमा सुताएं अनि खुट्टा फट्याएर मेरो ठन्केको लाँडो पुती निर पुर्याए । “ल अब गर्छु ल” मैले भने । “छिटो गर न , म तिम्रै लाँडोको चिकाईमा तड्पी रहेको छु, गर गर” भाउजुले भन्नु भयो । मैले पनि मेरो लाँडो भाउजुको पुती मा छिराएँ । मैले सोँचेको थिएँ, भाउजुको बिहे भाको धेरै भई सकेको छ, एउटा छोरी पनि छे, पुती को दुलो त खुकुलो होला तर वहाँको पुती मा मेरो लाँडो सजिलो सँग नछिरेको देख्दा अचम्म लाग्यो । “ओहो भाउजु, तपाईको पुती त टाईट छ त हौ !, अनि छोरी जन्माएको पुती पनि यती टाईट हुन्छ र ?” मैले सोधें । “भुँडी चिरेर जन्माको नि त छोरीलाई, तल बाट कहाँ निकालेको हो र !, त्यै भएर ” भाउजुले सहजै उत्तर दिनु भयो । “ए ए , त्यसो भए चिक्न रमाईलै हुने भो” मैले मन मनै सोँचे अनि मेरो लाँडो भित्र बाहिर गर्न थालें ।
“तिम्रो लाँडो पनि त गजब कै छ नि !, त्यै भएर पनि होला, मलाई हल्का दुख्ला जस्तो भई राछ, तर असाध्यै मजा आईराछ । जिन्दगी मा यो नै मेरो पहिलो पटको हो, यस्तो मजा गरि चिकेको । त्यस पछि मैले आफ्नो चिकाईको स्पीड बढाउन थालें । बल गरी गरी धक्का दिन थाले । भाउजु पनि तल बाट धक्का दिई मलाई सघाउन थाल्नु भयो । मलाई पनि भाउजु लाई चिक्न असाध्यै मजा आई रहेको थियो । १० मिनेट जति उत्तानो पारेर चिके पछि, म उठें अनि भाउजु लाई खाट बाट तल झारें । अनि भाउजु लाई घोप्टो पर्न लगाएँ अनि दुबै हात खाटमा टेक्न लाएँ । भाउजु लाई घोप्टो पारे अनि मेरो लाँडो फेरि पुतीमा छिराएँ । बल गरेर एकै चोटि ल्वाम्मै मेरो सबै लाँडो भाउजुको पुतीमा छिराएँ ।
“ऐयाऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ दुख्यो हौ यसरी त, अलि बिस्तारै गरन” भाउजु कराउन थाल्नु भयो । भाउजुको पीडाको कुनै वास्ता नै नगरी म बल गरी गरी चिक्न थाले । शायद अब दुखाई कम भएछ, भाउजु कराउन छाड्नु भयो र कण्डो हल्लाई हल्लाई मलाई चिक्न मा साथ दिनु भयो । यसरी चिक्दा झनै मजा आउन थाल्यो । मैले बल गरी गरी चिक्न थालें, भाउजु पनि मजा लिई लिई सुस्केरा हाल्न थाल्नु भयो “आहहहह..ओहहहहहह..सीसीसी…….” १० मिनेट जति यसरी चिके पछि मेरो माल झर्ने संकेत मेरो लाँडोले दियो । “भाउजु मेरो त झर्न लाग्यो, भित्रै झार्छु है ” मैले भने । “हुन्छ हुन्छ, तिम्रो तातो तातो माल म मेरो पुती भित्र महसुस गर्न चाहन्छु, भित्रै झार, चिन्ता नगर ” भाउजुले भन्नु भयो । अझ बल गरेर भाउजुलाई चिक्न थालें । १०-१५ पटक धक्का दिए पछि, मेरो लाँडोले सबै माल भाउजुको पुती भित्र ओकली दियो । म केहि बेर हल्लिदै बसें, भाउजु पनि कण्डो हल्लाउदै मलाई साथ दिनु भयो । त्यस पछि म पुरै थाकें अनि भाउजुको ढाँड माथी नै घोप्टो परेर बसें । “लाँडो पुती बाट बाहिर निकालें र बाथरुम तिर सफा गर्न गएँ । त्यस पछि भाउजु पनि सफा गर्न जानु भयो । अब भाउजु र म पुरै नाङगो खाटमा पल्टी रह्यौ । भाउजु ले आफ्नो टाउको मेरो छाती मा राख्नु भयो, म वहाँको कपाल खेलाउँदै बसें । केही क्षण चुपचाप बस्यौ, अनि मैले भने “अब सुतौं, राती फेरि उठेर चिक्छु ल तपाई लाई” “हुन्छ सुतौं, जो उठे पनि उठाई हाल्ने है, अनि फेरि गर्ने ल” भाउजुले भन्नु भयो । यसरी गफ गर्दा गर्दै हामी कति बेला निदाएछौँ, पत्तै पाईन । क्रमश: